Ny ho avy Utopiana amin'ny fivarotana fantsona | Martech Zone
Ny hoavin'ny utopiana amin'ny fivarotana fantsona
Alatsinainy, Aogositra 4, 2014 Alatsinainy, Aogositra 4, 2014 Dana Drissel
Ny mpiara-miombon'antoka amin'ny Channel sy ny Resellers miampy sanda (VAR) no zana-trondro mena (voatsabo nefa tsy ankanavaka ny fizokiana) raha ny fahazoana ny saina sy ny loharano avy amin'ireo mpanamboatra ny vokatra amidiny maro. Izy ireo no farany nahazo fiofanana ary voalohany tompon'andraikitra amin'ny fanatanterahana ny quota-ny. Miaraka amin'ny teti-bola marketing voafetra, sy ny fitaovana varotra lany andro, sahirana izy ireo mampita amin'ny fomba mahomby ny antony mampiavaka ny vokatra sy tsy mitovy.
Inona no atao hoe Channel Sales? Fomba fitsinjarana ampiasain'ny orinasa hivarotana ny vokariny, mazàna amin'ny fizarana ny herin'ny varotra ho vondrona izay mifantoka amin'ny fantsom-barotra isan-karazany. Ohatra, ny orinasa iray dia mety hampihatra tetika fivarotana fantsona hivarotra ny vokariny amin'ny alàlan'ny hery fivarotana an-trano, mpivarotra, mpivarotra na amin'ny marketing mivantana. Business Dictionary.
Tao anatin'izay taona faramparany dia nahita fitomboana mipoapoaka eo amin'ny sehatry ny haitao marketing izahay, ka nahatonga ny orinasan'ny fikarohana Gartner haminany mialoha izany CMO dia handany CIO amin'ny IT amin'ny taona 2017. Mahatonga ahy hanontany tena hoe ahoana, na raha hanitsy ny paikadin'izy ireo ny OEM, ary ny tena zava-dehibe, hisy ve ny fifantohana vaovao amin'ny fitaovana enablement sales izay mety hisy fiatraikany lehibe amin'ny fitomboana sy ny fahombiazan'ny fivarotana fantsona any?
Miaraka amin'ny haitao vaovao manova haingana ny tontolon'ny varotra sy ny fahazoana mivarotra heveriko fa ny hoavin'ny fivarotana fantsona dia hanamaivana ny sasany amin'ireo fanamby atrehin'ny mpiara-miombon'antoka sy ny VAR amin'izao fotoana izao:
Training - Fikarohana vao haingana nataon'ny Qvidian mampiseho fa izany maharitra 9 volana eo ho eo vao hampiofana mahomby ny solontenan'ny Sales, ary mety maharitra herintaona vao afaka mandaitra tanteraka izy ireo. Na dia tompon'andraikitra amin'ny fivarotana vokatra iray manokana na tsipika vokatra aza ny solontena antonony, ny VAR dia asaina mivarotra vokatra marobe avy amin'ny orinasa samihafa. Raha marina ity statistika ity ho an'ireo solontena mivarotra mivantana, dia tsy misy afa-tsy ny mpiara-miasa amin'ny fantsona iray izay manana andraikitra hianatra tady ho an'ny vokatra mivelatra kokoa napetraka avy amin'ny mpamokatra mihoatra ny iray dia mety maharitra kokoa ny fampiofanana.
Tsy fahampian'ny fitaovana fampidirana mpivarotra - 40% amin'ireo fitaovana marketing rehetra dia tsy ampiasain'ny ekipa mpivarotra, izay misy dikany rehefa heverinao fa matetika ireo fitaovana ireo dia brochure stattique sy collateral, horonan-tsary mihetsika, na fampisehoana PowerPoint mahazatra izay tsy tena manampy amin'ny famoronana dingana Sales. Satria ny mpividy amin'izao fotoana izao dia mitady fanaraha-maso bebe kokoa ary bebe kokoa, ny mpiara-miasa amin'ny fantsona dia tsy maintsy afaka manome traikefa Sales sy mifanakalo hevitra, ho an'ny vokatra / vahaolana rehetra amidiny. Rehefa mivarotra vokatra avy amina orinasa isan-karazany mifaninana mivantana, dia azo inoana fa handany ny fotoanany ireo mpivady fantsona hanandrana mivarotra ireo vokatra hitany fa mora ny manavaka azy – ary noho izany dia mifampiraharaha akaiky. Ireo mpanamboatra vokatra dia nahatsapa an'io, ary efa mivadika modely Vokatra 3D virtoaly, izay mijery sy mitondra tena toy ny tena vokatra, mba hatolotr'ireo ekipa Sales sy mpiara-miasa amin'ny fantsona. Na izany aza, ny mpiara-miasa amin'ny fantsona dia matetika no farany nahazo ireo fitaovana enablement sales enti-miasa noho ny sarany fahazoan-dàlana avo lenta raha toa ka mahazo fitaovana mifandraika mihitsy izy ireo, ary mamela azy ireo amin'ny fatiantoka lehibe.
fanatontoloana - Ny VAR sy ny mpiara-miasa amin'ny fantsona dia matetika manerana an'izao tontolo izao, mety ho lavitra ny toerana misy ny mpamokatra akaiky indrindra na ivon-toeran'ny fampisehoana vokatra. Noho izany dia mila fitaovana izay ahafahan'izy ireo mivarotra tsara kokoa amin'ny toerana rehetra, amin'ny fotoana rehetra. Raha manomboka manamaivana an'io olana io ny rindranasa finday dia maro ny takelaka / finday avo lenta mitondra lanjan'ny lazan'ny firenena marobe, ka mahatonga ny fampielezana votoaty ho sarotra kokoa, satria ny fitaovam-pivarotana enta-mavesatra dia tokony ho afaka hiasa amin'ny fitaovana INONA no ampiasain'ny mpiara-miasa amin'ny fantsona. Ny sakana amin'ny fiteny ihany koa dia mahatonga ny fitaovam-pivarotana maro tsy misy ilana azy, raha tsy hoe azo adika amin'ny fiteny eo an-toerana hampiasaina any amin'ny firenena vahiny.
Fidirana manerana izao rehetra izao - Araka ny efa voalaza tetsy aloha, ny solontena niparitaka manerantany dia mampiasa fitaovana maro isan-karazany, manomboka amin'ny solosaina finday ka hatramin'ny fitaovana finday ary mila fitaovana mandeha amin'ny sehatra tsy misy tohana — manome traikefa manerantany na aiza na aiza toerana. Araka ny Qvidian, ny antony voalohany mahatonga ny Sales tsy hiraharaha ireo fitaovana ara-barotra satria tsy afaka mahita na miditra azy ireo izy ireo. Midika izany fa ny fampidirana ny fampahalalana marina apetraka eo am-pelatanan'ny mpiara-miasa amin'ny fantsona sy ny VAR amin'ny fitaovana mety dia zava-dehibe indrindra hampitana ny hafatrao tsy tapaka sy tsy tapaka. Raha hampiasaina any amin'ny faritra sarotra idirana Internet, na hampiasaina amin'ny toerana toy ny foibe orinasa na hopitaly izay ferana matetika ny fidirana amin'ny Internet, ny mpiara-miasa amin'ny fantsona dia mila fampiharana izay mandeha amin'ny Internet sy amin'ny Internet, amin'ny solosaina finday, finday avo lenta ary takelaka. Matetika, ireo karazana fampiharana ireo dia mitaky fahazoan-dàlana (mifototra amin'ny isan'ny mpampiasa), izay mamela ny mpiara-miasa fantsona sy ny VAR amin'ny fatiantoka lehibe, satria maro ny OEM no misalasala haka ny takelaka ho an'ireo mpiara-miasa amin'ny fampitaovana ara-barotra na mety tsy mampiasa. .
Alao an-tsaina ny ho avy Utopian ho an'ny fivarotana Channel
Fitaovana enablement mivarotra natao indrindra ho an'ny fantsona dia tsy vitan'ny hoe manome fidirana 100% amin'ny vokatra azo ifandraisana, (amin'ny fampisehoana azy ireo saika) fa hampiseho koa ny fomba hiarahan'ny vokatra isan-karazany hamahana tsara ireo fanambin'ny orinasan'ny mpanjifa, na iza na iza orinasa manamboatra azy ireo. Io dia hanova ny mpiara-miasa rehetra ho manam-pahaizana momba ny vokatra, satria izy ireo dia mila fampisehoana vokatra mifandraika amin'izany, fitaovana enti-miasa ary hafatra ara-barotra eo am-pelatanan'izy ireo amin'ny fotoana fohy. Farany, ny mpiara-miasa amin'ny fantsona dia afaka mampifangaro ireo fampisehoana vokatra virtoaly 3D rehetra ireo, na inona na inona OEM, ho lasa fitaovana fampitaovana varotra mifandraika amin'ny marika manokana, ahafahan'izy ireo maneho ny tsara indrindra vahaolana ho an'ny mpanjifa amin'ny fampiraisana ny tolotra isan-karazany avy amin'ny mpiara-miasa aminy.
Tsy ny fidirana amin'ny làlan'ny vokatra rehetra ihany no ilain'ny fitaovana idealy fa ny mpampiasa tsy manam-petra dia hanana fidirana 24/7, an-tserasera na an-tserasera, na aiza na aiza eto amin'izao tontolo izao — manome traikefa manerantany na aiza na aiza toerana na sehatra. Ny lahatsoratra mora azo adika dia hahatonga ny famoronana kinova iraisampirenena ho fampiharana haingana, ary ny fifanentanana miampita amin'ny rindrambaiko iraisampirenena dia hanova ny fananan'ny mpiara-miombon'antoka fitaovana ho mpanafaingana ny varotra.
Na dia toa nofinofy aza izany dia mino aho fa tsy dia lavitra loatra angamba ny hoavin'ireo fitaovana mifampitohy sy hiampita toy izany ho an'ireo mpiara-miasa amin'ny fantsona sy ireo VAR!
Tags: mpiray fantsonavarotra fantsonafiofanana momba ny varotra fantsonaandraikitragartnerfanatontoloanainteractive interactiveoemqvidianresellersFanamafisana ny varotrafidirana manerana izao rehetra izaompivarotra miampy sandadiavars
Dana Drissel Monday, August 4, 2014 Monday, August 4, 2014
Dana Drissel dia mpanentana ara-barotra stratejika manokana amin'ny programa atosika amin'ny fampielezan-kevitra izay manintona, mitazona ary mamelona ny fanantenana amin'ny alàlan'ny fantsom-pivarotana. Amin'izao fotoana izao ny Talen'ny Senior Marketing an'ny Kaon Interactive, izy no namaritra ny marika orinasa, nanolotra ny fandrefesana ny tanjona ROI, ary nampiditra vahaolana marobe Kaon, nanangana fotodrafitrasa ho an'ny mpanjifa mitarika indostrialy amin'ny sehatry ny orinasa isan-karazany.
Moa ve ny fampiasanao Pinterest ho an'ny finday?
Fomba fitetezana 4 lehibe mankany amin'ny paikady marketing amin'ny finday matanjaka